खोप लगाइसकेका मानिसमा फेरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुनुको अर्थ के हो ? Canada Nepal
खोप लगाइसकेका मानिसमा फेरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुनुको अर्थ के हो ?
बीबीसी बैशाख ३० २०७८
काठमाडौँ। खोपको दोस्रो मात्रा लिएको तीन हप्तापछि दिल्लीका एक विज्ञान संवाददातामा उच्च ज्वरो, घाँटी दुख्ने समस्या र असजिलो महसुस हुने लक्षण देखा पर्‍यो। पल्लव बाग्लालाई एप्रिल २२ मा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो। त्यसको चार दिनपछि छातीको परीक्षण गर्दा उनको सफा फोक्सो सेतो हुँदै गएको देखियो।
ज्वरो नथामिएकाले लक्षण देखिएको आठ दिनपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) का चिकित्सकहरूले उनको रगत परीक्षण गरे र उनलाई स्टेरोइडहरू दिन थाले। उनलाई मधुमेह भएकाले उनको रगतमा चिनीको मात्रा उच्च देखिन थाल्यो। तर भाग्यवश उनको अक्सिजनको तह कहिल्यै पनि खतरा उत्पन्न गराउनेगरी घटेन।
आठ दिन अस्पताल बसेर फर्कनुअघि चिकित्सकहरूले खोप नलगाएका उनकै उमेरका मधुमेह भएका व्यक्तिको फोक्सोको एक्सरे तुलना गरेर उनलाई देखाए। बाग्ला भन्छन्, “फरक स्पष्ट थियो। यदि मैले खोप नलगाएको भए मलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने कुरा चिकित्सकहरूले बताए। समयमै पूर्ण रूपमा खोप लगाएकाले मेरो जीवन जोगियो।”
अहिलेसम्म भारतले आफ्नो एक अर्ब ३० करोड जनसङ्ख्याको केवल तीन प्रतिशतलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाएको छ। तर पूर्ण रूपमा खोप लगाएको दुई हप्तापछि पनि सङ्क्रमण हुने मानिसहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी विशेष गरी चिकित्सक, नर्स र अस्पताल अनि क्लिनिकका कर्मचारीमा यस्तो देखिनु सामान्य हो। तर बाग्ला फरक व्यवसायमा भएकाले वैज्ञानिकहरूले उनको नाक र घाँटीबाट नमुना सङ्कलन गरेर उनलाई सङ्क्रमण गर्ने भाइरसको आनुवंशिक अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छन्।
यसको उद्देश्य अहिले अस्तित्वमा रहेका खोपहरू – भारतको हकमा दुईवटा खोप – कोरोनाभाइरसको नयाँ र अझ सङ्क्रामक प्रकारहरूबाट मानिसलाई जोगाउन पर्याप्त छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो।
कोरोनाभाइरसका खोपहरू प्रभावकारी रहेकोमा विवाद छैन। तिनले सङ्क्रमण रोक्न नसके पनि भाइरसका खतरनाक प्रकारबाट हुने गम्भीर प्रकारका समस्या र मृत्युबाट जोगाउन सक्ने ठानिएको छ।
तर "भ्याक्सीन लगाएपछि पनि हुने सङ्क्रमण" अनपेक्षित हैन। एप्रिल २६ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा खोप लगाइसकेका साढे नौ करोड लाख मानिसमध्ये ९,००० भन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको बताइन्छ।
तीमध्ये ९ प्रतिशत अर्थात् ८३५ जना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए र १३२ अर्थात् एक प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो। अस्पताल पुगेका एकतिहाइ बिरामी र ज्यान गुमाएका १५ प्रतिशत बिरामीमा ‘सङ्क्रमण नदेखिएको वा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित नरहेको' विवरण आएको थियो।
कमजोर तथ्याङ्कका कारण भारतको अवस्था अझै अस्पष्ट छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा पूर्ण रूपमा खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमण देखा परेको र केहीले ज्यान पनि गुमाएका विवरण आएका छन्। तर सङ्क्रमणले नै ज्यान लियो कि लिएन भन्ने स्पष्ट छैन।
बैशाख ३०, २०७८ बिहिवार १८:४६:०० बजे : प्रकाशित
# कोरोना भाइरस सङ्क्रमण